Haddii aad ku jirto warshadaha suuqgeynta emailka, waxaa laga yaabaa inaad wax ka maqashay DMRC. DMARC waxay u taagan tahay Hubinta Fariinta ku saleysan Domain-ka, Warbixinta iyo Waxqabadka. Wixii macluumaad dheeri ah, waxaan aad ugu talin lahaa Agari goobta iyo meeshooda DMARC dukumiintiyada iyo bogga kheyraadka mawduuca.
Sida laga soo xigtay khabiirada 250ok, kafaala-qaadaha emaylkeena, waa kuwan faa'iidooyinka DMARC:
Waxay jaangoynaysaa howlgalka iyo tarjumaadda borotokoollada xaqiijinta emaylka ee caanka ah ee sida ballaaran loo geeyay SPF iyo DKIM.
Waxay kaa caawineysaa hirgelinta iyo geynta SPF iyo DKIM dhammaan marinnadaada boostada adigoon ka baqaynin inay saameyn ku yeelato gudbinta.
Waxay faraysaa ISP-yada iyo cinwaanada gaarka loo leeyahay ee ka difaacaya isticmaaleyaasha dirayayaasha adeegsiga rukhsadda iyo khiyaanada ah ee sumaddaada iyo waxyaabahaaga.
Waxay sababtaa qaatayaasha adduunka oo dhan inay soo saaraan heer warshadeed (laakiin gaar loo leeyahay iyo indhahaaga oo keliya!) Warbixinnada ku saabsan boostada ay kaa helaan.
250ok waxay ku dartay Dashboardka 'DMARC Dashboard-ka' Xog-ogaalkooda Sumcad, oo ah qalab si fudud loo isticmaali karo oo loogu talagalay inuu kaa caawiyo inaad ansaxiso diiwaankaaga SPF iyo DKIM iyo sidoo kale inuu kaa caawiyo inaad si habsami leh ugu gudubto DMARC.
Waxaan kafaalaqaadnay oo aan soo saarnay macluumaadkan si aan uga caawino suuqgeeyayaasha iimaylka inay si fiican u fahmaan dhibaatada iyo sidoo kale qiimaha lagu qaadanayo qeexitaanka DMARC. Waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa dhammaan kooxda DMARC ee naga caawiyey waxbarista iyo bixinta macluumaadka looga faa'iideystay infographic!
Tags: 250okdkimDMRCfaahfaahinta dmarcgaarsiinta emaylkaemaylka emaylkasidee ayuu u shaqeeyaa DMARCCiidanka Booliiska Soomaaliyeedwaa maxay DMARC